Maydka cunug yar oo Muslim ah oo dalka Sri Lanka lagu gubey oo uu muran ka taagan yahay + Sababta loo gubey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maydka cunug yar oo Muslim ah oo dalka Sri Lanka lagu gubey...
Maydka cunug yar oo Muslim ah oo dalka Sri Lanka lagu gubey oo uu muran ka taagan yahay + Sababta loo gubey
(Hadalsame) 27 Dis 2020 – Gubitaanka qasabka ah ee Sri Lanka loogu gaystay maydka canug yar oo Muslim ah oo 20 maalmood jiray ayaa waxa ay bannaanka soo dhigtay amarka muranka badan uu ka dhashay ee dowladda ee ah in la gubo maydadka dhammaan dadka u dhinta cudurka Covid-19.
Maxamed Faahim iyo xaaskiisa Fathima Shafna ayaa aad u farxay markii uu dhashay wiilkooda yar ee Shaykh 18-kii Nofeembar kaddib lix sanadood oo ay sugayaan.
Hasayeeshee faraxaddaas ma aanay sii raagin.
Waa goobta lagu gubo dadka Sri Lanka ugu dhinta fayraska korona sida Shaykh oo kale
Dowladda ayaa waxa ay ku doodaysaa in aaska maydadka ay suuragal tahay inay sumeeyaan biyaha dhulka hoostiisa ku jira, iyagoo soo qaadanaya hadal ay guddi khubara ah sheegeen, hadalkaas oo sida uu ku yimid iyo daliilka ay u adeegsadeen aanan la garanayn.
Prof Malik Peiris, oo ah dhakhtar fayraska ku takhsusay oo caalamka aad looga yaqaan, ayaa waxa uu su’aal galiyay dooddaas dowladda.
“Covid-19 ma ahan cudur biyo ka dhashay,” Prof Peiris ayaa BBCda u sheegay.
“Ma aan arag wax caddayn ah oo muujinaysa in cudurka ay sii faafaahin karaan dadka u dhintay. Fayrasku wuxuu ku faafaa oo kaliya unugyada jirka nool. Markii uu qofku dhinto, awooddii uu fayrasku ku kobci lahaa aad bay u yaaraataa.”
Waxa uu intaasi ku daray: “Maydadku laguma aaso meel ay biyo marayaan. Markaad maydka qofka ku aastid lix feet dhulka hoostiisa ee aad misana dhar ku xirxirtid, waa ay adagtahay in biyo socdaa uu maydkaas sumeeyo.”
Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in ay baadigoobayso dhul lagu aaso Muslimiinta u dhimata Covid
Markii hore aad looguma naxariisanayn bulshada Muslimiinta ah hasayeeshee markii sida qasabka ah loo gubay maydka Shaykh ayey arrintu isbadashay.
Waxyar uun kaddib markii uu soo baxay warka, ayaa rag, haween, iyo wadaado diimaha kale matalayay, dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay isugu soo uruureen afaafka hore ee goobta maydadka lagu gubo, waxa ayna albaabka ku xireen xargo cadcad. Inta badan dadkaasi waxa ay ka soo jeedeen bulshada laga tirada badan yahay ee Sinhala.
Dadka ayaa sidoo kale baraha ay bulshada ku wada xiriirto ku dhaleeceeyay waxa dhacay.
Dad xargo cad cad ku xiraya goobta maydadka lagu gubo
Hilmy Axmed, kuxigeenka gudoomiyaha Golaha Muslimiinta ee Sri Lanka, ayaa BBCda u sheegay in ay iska caddahay in arrintan ay qeyb ka tahay ajande “midab kala sooc” oo lagu bartilmaameedsanayo Muslimiinta laga tirada badan yahay.
“Dowladda uma muuqato inay aqbalayso waxkasta oo sayniska lala xiriirinayo,” ayuu yiri. “Uma muuqdaan inay qaadanayaan talada khubarada fayraska iyo dadka cilmiga durugsan u leh caafimaadka. Tani waa ajande midab kala sooc oo lagu soo gudbinayo ra’yiga koox kooban oo farsamo.”
“Waa wixii ugu dambeeyay ee Muslimiinta lagu samayn lahaa sababtoo ah cid ogolaanayso malahan in canug yar maydkiisa la gubo,” ayuu ku daray. “Sidoo kale waxaa arrintaas la sameeyay iyadoon maydka canuga la tusinin waalidiintii.”
Hasayeeshee dowladda ayaa gaashaanka u daruurtay in tallaabooyinka lagu baacsanayo Muslimiinta, iyadoo sheegtay in xitaa Budhhistaha reer Sinhala dadka ay jecelyihiin ee dhintay lagu gubo muddo 24 saacadood ah, arrintaas oo ka hor imanaysa dhaqankooda.
Ra’iisul Wasaare Mahinda Rajapaksa ayaa dhanka kale waxa uu amray mas’uuliyiinta inay keeneen dhul qalalan oo lagu aaso dadka u geeriyooda fayraska korona, waxaa sidaas lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa.
Dhanka kale, Mr Faahim ayaa sheegaya in illaa hadda aanay weli maskaxdiisa ka bixin waxa ku dhacay wiilkiisa yar ee Shaykh.
“Rajadaydu waxa ay tahay oo kaliya in qof kale uusan marin xanuunkan oo kale. Ma doonayo in carruurta kale ay ku dhacaan waxa wiilkayga ku dhacay.”
Previous articleTOOS u daawo: Man City vs Newcastle Utd, Sheffield Utd vs Everton – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Jubbaland waxay ka tirsanayd Kenya!!” – Kenya oo maqaal uu qoray Daily Nation ku sheeganaysa gobol Soomaaliyeed